Global Voices teny Malagasy » Fanentanana Tao Bhutan, Manome Kiraro Ho An’Ireo An’arivony Mila Izany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Septambra 2014 8:47 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Tantely
Sokajy: Azia Atsimo, Bhutan, India, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Tanora, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna, Vaovao Tsara, Vonjy Voina
Niantomboka niaraka tamin'i Sandeep Gajakas ny tantara, injeniera iray avy any India, izay namorona ny hevitra  fanadiovana kiraro. Hitan'i Gajakas fa ny olona sasany tsy manao ezaka mba hanadiovana ny kirarony. Raha miandry ny olona hafa hanao izany ho azy izy ireo, dia ho asa tsara sy maharitra io. Ny taona 2003, nanomboka nanao ny asa voalohany tany India momba ny resaka fanadiovana kiraro sy fanamboarana ny simba izy ho an'ny karazana kiraro rehetra, tao Mumbai. Hatreto, miparitaka aminà tanàna 10 any aminà firenena telo ny orinasany ShoeVival .
I Dawa Drakpa, tanora Bhutane mpandraharaha, no nitondra ny ShoeVival tany Bhutan ny taona 2011. Mitantara ny zavatra niseho taorian'izay i Passang Tshering,  Bhutane mpitoraka bilaogy :
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy momba ny ady voalohany natao i Dawa Drakpa , sy ny fomba niantombohan'ilay asa sosialy antsoina hoe Help Shoe Bhutan . Nahita kiraro maro be tany amin'ny toerana fanariana fako i Drakpa, ary nieritreritra hoe mbola afaka amboarina ary ampiasaina indray izao ny ampahany betsaka amin'izany. Any ambanivohitr'i Bhutan, mandeha an-tongotra halavirana maromaro tsy mikiraro mendrika azy tsara ireo ankizy maro , mba handeha any an-tsekoly. Tsy mikiraro matetika ireo mpamboly miasa tany, satria tsy manana fahafahana hividy kiraro.
Nanomboka ny volana Septambra 2011 ny hetsika fanangonana kiraro tonta. Amin'iny teny nilazàn'i Drakpa azy :
Nampahatsiahy i Drakpa hoe maro ireo fikambanana Bhutane, orinasa  ary olon-tsotra no tonga mba hanampy ilay ezaka, amin'ny fanomezana fanampiana ara-bola  na fanomezan-tanana. Mitentina eo amin'ny Nu.80 (1.30 dolara amerikana) isaky ny kiraro ny fanadiovana sy ny fanamboarana ny simba, tolotra iray izay ny orinasa Mpanadio Kiraron'i Drakpa no manome azy. Nanjohy izany ny Bhutan Dragons Motorcycle Club , ho toy ny mpiara-miasa amin'ny fitsinjaràna, mba hizara ireo kiraro any amin'ny toerana ambanivohitra mila azy ireny. Notantariny  ny fomba niarahan'ireo mpikambana ao aminy nirona taminà diaben'ny fanampiana, tao anatin'ny toetrandro namirifiry sy be zavona, mba hizara ireo kiraro sy fitaovana hafa, tany amin'ny distrikan'i Samtse , tany atsimo andrefan'i Bhutan.
Tamin'ny Martsa 2012 ny fizarana voalohany. Manoratra i Drakpa :
Nizara kiraro tany Zhemgang, distrika mahantra indrindra any Bhutan, ihany koa ny ekipan'ny Help Shoe Bhutan. Nampahatsiahy i Drakpa :
Ny fanentanana voalohany, izay naharitra hatramin'ny volana May 2012, dia nizaràna kiraro teo ho eo amin'ny 1.300. Natomboky  ny Zanaka Vavin'ny Mpanjaka Chimi Yangzom Wangchuck , ny volana Jiona 2012, ny fanentanana faharoan'ny Help Shoe Bhutan, niaraka tamin'ny drafitra hizarana kiraro miisa 2.000. An-dàlana ny hetsika, miaraka amin'ny fitambaran'isan'ny voazara hatry ny 21 May 2014, mahatratra 5.996 .
Inona no manaraka ho an'ilay fanentanana? Araka ny pejy Facebook-ny , mankany amin'ny fianarana ambaratonga faharoa ireo ekipa mba hampianatra ireo mpianatra hoe ahoana ny fanadiovana ary fanamboarana ny kiraro. Manamarika izao ny lahatsoratra tamin'ny 24 Jolay :
Afaka arahanao ato amin'ny pejy Facebook-ny  ny tetikasa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/05/63767/
 namorona ny hevitra: http://www.businessgyan.com/content/shoe_laundry
 Passang Tshering,: http://www.passudiary.com/2014/08/breaking-shoemakers-curse.html
 ankizy maro: http://dawa-dakpa.blogspot.com.au/2012/03/help-shoe-bhutan-behind-scene.html
 fanomezana fanampiana ara-bola: http://www.loden.org/old/loden-news/142-lodens-entrepreneurs-launches-help-shoe-bhutan-project.html
 distrikan'i Samtse: http://en.wikipedia.org/wiki/Samtse_District
 pejy Facebook-ny: https://www.facebook.com/HelpShoeBhutan/posts/735798539818701
 lahatsoratra tamin'ny 24 Jolay: https://www.facebook.com/HelpShoeBhutan/posts/755403571191531
 pejy Facebook-ny: https://www.facebook.com/HelpShoeBhutan